यस्तो छ एनआईसी एशिया बैंकको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय नतिजा - Deshko News Deshko News यस्तो छ एनआईसी एशिया बैंकको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय नतिजा - Deshko News
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले चालु आ.व. २०७६÷७७ को तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरणका परिसूचकहरू अत्यन्त उत्साहजनक रहेका छन् ।
विश्वव्यापी महामारी covid 19 को असहज परिस्थितिको बाबजुद बैंकले चालु आ. व. को तेस्रो त्रैमाससम्म वार्षिक विन्दुगत आधारमा १२% (रू. ३८ करोड) ले वृद्धि गरी रू. ३ अर्ब ६० करोड सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । यसैगरी खुद मुनाफातर्फ वार्षिक विन्दुगत आधारमा १०% (रू. २६ करोड) को वृद्धि सहित रू. २ अर्ब ५० करोड खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको सोही अवधीको खुद मुनाफा रू. २ अर्ब २८ करोड रहेको थियो ।